Banyere Anyị - Changzhou Zonel Environmental Technology Co., Ltd.
Kpọọ anyị:+86 18679002828
Nzacha mmiri mmiri
Ihe mmịfe ikuku
Banyere Zonel Filtech
Ụlọ ọrụ Zonel gụnyere Zonel Filtech na Zonel Plastic, azụmahịa gụnyere ngwọta nzacha (Filter Machines and Filter Materials) na ngwaahịa ụlọ ọrụ plastik (monofilament & extruding machines, PVB films).
The Zonel Filtech dị ka otu n'ime ndị kasị ọkachamara na ndị na-edu-ọnụ na-emepụta bụ ndị ọkachamara na R & D ngwọta maka mmiri mmiri siri ike nkewa na ikuku siri ike nkewa yana ngwọta mmịfe ikuku kemgbe 2008, ụlọ ọrụ na-enye ndị kasị echekwa ma dị irè filtration. ngwọta maka ndị ahịa anyị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ụlọ ọrụ niile.
The ụlọ ọrụ na mkpara n'elu 220, jikọtara ya na management ụlọ ọrụ, teknuzu R & D ngalaba, sales ngalaba, mmepụta ngalaba, zuo ngalaba, echichi na-ewu ngalaba, mgbe ahịa ngalaba mere ka dozie ọ bụla kwere omume nsogbu anyị ahịa.
The mmepụta ngalaba jikọtara na 5 pụrụ iche ogbako: gụnyere igwe anaghị agba nchara nzacha ụlọ ogbako, uzuzu uzuzu na uzuzu katrij ogbako, nyo ákwà na nzacha akpa ogbako, ikuku slide ákwà ogbako na mmiri mmiri nzacha ogbako, nke bụ ntọala nke Zonel Filtech ka. dozie nsogbu ndị ahịa anyị n'usoro.
Enyere ngwaahịa filtration sitere na Zonel Filtech karịa mba 40 nke ụwa, nke a na-ejikarị na ụlọ ọrụ ọla, ụlọ ọrụ ike, ụlọ ọrụ na-egwuputa ihe, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụlọ ọrụ ihe owuwu ụlọ, ụlọ ọrụ roba, ụlọ ọrụ nhazi osisi, ụlọ ọrụ na-edozi plastik, nri nri. & ụlọ ọrụ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ, ụlọ ọrụ nhazi igwe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ kpọmkwem iji nyere ndị ahịa anyị aka dozie nsogbu ha na itinye uche / mkpofu mmiri na nchịkwa ikuku.
Enyemaka ọ bụla achọrọ na nzacha, nabata ịkpọtụrụ Zonel Filtech!
Kedu ihe bụ ZONEL?
Zero, mmezu gara aga agabigala, anyị ga-edobe àgwà kacha mma maka ịrụ ọrụ site na efu, mmụta mgbe niile, na-achọ mgbe niile, na-emepe emepe mgbe niile.
Optimization, Optimization bụ ihe anyị na-achụso.
Ọ dị mkpa, naanị anyị na-enye ndị ahịa anyị ndụmọdụ ndị dị mkpa ma na-enye ihe ngwọta kachasị mma.
Ịrụ ọrụ nke ọma, arụmọrụ bụ ụdị ọrụ anyị, na-achọta mgbe niile ngwọta kachasị mma maka ndị ahịa n'oge dị mkpirikpi.
Ka anyị, anyị na ndị ahịa anyị na-eguzo mgbe niile ma na-eche ihe niile maka ha.
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ndepụta ọnụahịa, biko hapụ email gị na anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 24.Ajuju
Adreesị ụlọ ọrụ:Ime ụlọ 1903 ~ 1905 nke Ụlọ 4, Baolong City Plaza, Zhonglou, Changzhou, Jiangsu, China
Adreesị ụlọ ọrụ:No.19 nke Xi Taihu Road, Wujin Economic Development Zone, Jiangsu, China.
Nkwado nka na ụzụ:+86 18679002828